बैशाख ९, काठमाण्डौ । गन्तव्य नेपाल गु्रप अन्र्तगत रहेको गन्तब्य नेपाल ईभेन्ट म्यानेजमेन्टले २०७६ बैशाख १३ र १४ (अप्रिल २६ र २७) गते काठमाण्डौको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलसहितको चौरमा डोमेस्टीक टुरिजम मार्टको तयारी अन्तीम चरणमा पुगेको छ ।
मेलाको मिति नजिकिदै गर्दा बिभिन्न प्रचारप्रसार समितीहरु मार्फत प्रचारप्रसार तिब्र पारिएको छ ।
पहिला देश अनि बिदेश भन्ने नाराका साथ नेपाल भित्रका पर्यटकीय गन्तव्य तथा उत्पादनको चिनारी गराउने प्रमुख उदेश्यले आयोजना गर्न लागिएको २ दिने मेलामा २ लाख भन्दा बढिको सहभागिता गराउने तयारीका साथ आयोजक जुटीरहेको छ । डिटीएम प्रचारप्रसार गर्न रिर्पोटस क्लबका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋषि धमलाको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय मिडिया कमिटी बनाएर अघि बढिरहँदा पछिल्लो प्रचार प्रसार र यसले पार्ने प्रभाव र आवश्यक्ता कस्तो छ त । बुझ्ने कोशिस गरेका छौ । प्रश्तुत छ, रिर्पोटर्स क्लबका अध्यक्ष तथा डिटीएम मिडिया प्रचारप्रसार समितीका संयोजक ऋषि धमला सँगका केही सवाल ।
१. डिटीएमको प्रचार प्रसार केकसरी भैराखेको छ ?
आन्तरीक पर्यटन मेला(डिटीएम) साँच्चिकै उदाहरणीय छ । यो आन्तरीक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सार्थक खोजी हो । आन्तरीक क्षेत्रबारे जानकारी नगराएसम्म पर्यटन अगाडि बढ्न सक्दैन । मेला सफल हुन्छ, बनाउनु पर्छ । देशभरीका सर्बसाधारणलाई भृकुटीमण्डपमा भेला पार्छौ ।
२. मेला सफल बनाउनको लागि तपाई आफैले चै के गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रचार प्रसार सामाग्रीमा तिब्रता दिएको छु । बिहान बेलुका रेडियो तथा टेलिभीजनमा यसबारे बहश, बिश्लेषण र जानकारी गराईरहेको छु । रिर्पोटर्स क्लबमा पनि आन्तरीक पर्यटन मेलाको आवश्यक्ता र हुन गईरहेको कार्यक्रम सम्बन्धमा जानकारी दिने गरेको छु ।
यस्तो मेला देशभित्र हुनुपथ्र्यो, अहिले हुँदै छ । राम्रो कुरा हो । ७७ वटै जिल्लामा गएर त्यहाँ भएका उत्पादन काठमाण्डौको बजारसम्म जोड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म जोडिनुपर्छ । मुख्यत: ४ वटा पक्षमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ । पहिलो बिज्ञापन नै हो । कहाँ केका लागि प्रशिद्ध छ, जानकारी बाहिर ल्याउनुपर्छ । अर्को उत्पादन गरेका कुराहरु समयमा बजार सम्म पुर्याउने र उत्पादन बढाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका साथै समन्वय र सहयोग सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ । नेपालको पर्यटन समृद्ध छ, बनाउनुपर्छ ।